ProjectLibre: Beddelka Mashruuca Microsoft | Laga soo bilaabo Linux
Haddii aad ka mid tahay dadka u baahan inay maareeyaan mashaariicdooda, ha ahaato injineer ama adeegsade caadi ah, oo waxaad u adeegsanaysaa tan Mashruuca MicrosoftHagaag, waxaan ku siinayaa war wanaagsan: Waxaan horeyba u haysanay bedel bilaash ah oo la yiraahdo MashruucaLibre Kaliya maahan bilaash, laakiin sidoo kale waxay leedahay astaamaha soo socda:
Taageerada Microsoft Project 2010
UI Ribbon cusub
Dayactirka cayayaanka ee muhiimka ah iyo inbadan
Sida laga soo xigtay abuurayaasheeda, fikradda bilowga ahi waxay ahayd in la bilaabo beddelaad Mashruuca Mashruuca Microsoft wac Mashruuca ProjectLibreLaakiin waxay ogaadeen inay ku qasbanaayeen inay marka hore soo bandhigaan qalab desktop ka dibna ay soo bandhigayaan nooca serverka
Gaar ahaan, waligey ma aanan isticmaalin aaladda noocan ah, laakiin waxaan u maleynayaa in dadka isticmaala ee sidaas sameeyay ay heli doonaan bedel fiican. Waxaan rajeyneynaa in qof halkan jooga uu la wadaagayo dareenkooda arrintan.
Bogga soo dejinta waxaad ka heli kartaa binaries Windows, Linux y Mac OS X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » ProjectLibre: Beddelka Mashruuca Microsoft
Mid ka mid ah khaladaadkii waaweynaa ee aan galay, bedelna u ahaa Mashruuca MS.
Nacalad ayaa igu garaacday inay tahay codsi culeys, tijaabin ah.
Oo anigu waxaan arkaa in isdhexgalka uu u egyahay xafiiska microsft 2007 iyo 2010, ma wuxuu ku kici doonaa LibreOffice wax badan oo ah isdhexgal la mid ah?
Way fiicnaan laheyd haddii horumariyayaashani ay go'aansadaan inay ka dhigaan xafiiskooda Office runti waxaan u maleynayaa inay noqon doonto halbeegga Linux.
Waxaan u maleynayaa inaysan noqon doonin wax aad u macquul ah tan iyo hada Clouds, qaar badan oo ka mid ah codsiyadaan waxaa loo qaadayaa daruurta. Tusaale ahaan dukumiintiyada google, hadda baabuur wad, waxaad haysataa erey-sameeyeyaal, xaashiyo isweydaarsiyo iyo bandhigyo la sameeyo. Si daacadnimo ah, uma isticmaalo libreWriter mar dambe maxaa yeelay waxaan isticmaalaa Dukumiintiga ay google kugu siiso Google Drive kaaga. Laakiin aad ayey u fiicnaan laheyd haddii ay jirto meel si buuxda u shaqeyneysa oo loogu talagalay dadka isticmaala GNU / Linux iyo kuwa kale.
Waxaan arkaa in faylka uusan aad u cusleyn, mashruuca microsoft wuxuu culeyskiisu yahay ugu yaraan 200 ilaa 500 mb. Waqtigaan sifiican usameyno.
Beddel ayaa loo baahday si loo soo saaro jaantuskan oo kale, oo leh LO horey ayaan ugu haysannay Visio. Waxaan isla markiiba tijaabin doonaa.
QORSheeyaha horeyba wuu u jirey (ugu yaraan meelaha lagu keydiyo fedora iyo debian) ...
Ku jawaab josefrito
Waxaa sidoo kale jira Qorshe Suite Calligra
Hagaag, khaladkeyga, waan ka xumahay, ma aanan ogeyn Qorsheeye ama Caligra Plan, si kastaba ha noqotee, noocyada kala duwan sidoo kale waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda.
Waxaan ku isticmaali jiray OpenProj mashruucii ugu dambeeyay ee aan maareeyay. Mid ka mid ah shaqooyinka maqan ayaa ah inaysan oggolaan daabacaadda PDF, waxay sidoo kale kuu gudbinayaan mashaariicda ku saabsan nooca dalabka (http://openproj.org/pod), oo umuuqata mid aan jirin tan iyo markii iskuxiraha horey iyo gadaal loogu sii gudbiyey http://sourceforge.net/projects/openproj/. Sida iska cad shatiga la daabacay waa wax laga beddeli karaa, laakiin runtu waxay tahay in tani aysan ahayn waxa aan qiimeyneyno.
Dhinaca kale, waxaan kugula talinayaa faallooyinka ku saabsan mashruuca http://sourceforge.net/projects/openproj/, gaar ahaan diidmada ka wax dhisid badan.
Waa maxay shatigu? Maalmo ka hor waxaan eegay websaydhka, laakiin waxba kamaan helin.
Bogga mashruuca ma aanan helin sidoo kale. Waa inaad aadaa bogga asal ahaan halkaasoo ay ka muuqato: Shatiga Sahlashada Dadweynaha ee Wadajirka ah 1.0 (CPAL), wikipedia waxay leedahay: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Public_Attribution_License
Waa wax fiican tan, kahor intaanan isticmaalin mashruuc furan laakiin waxbadan iguma qancin. Waxaan tijaabinayaa qalabkan.
Mahadsanid. Horaanba u soo dajiyay oo waan isku dayayaa. Waxaan horey u adeegsaday mashruuca furan waana mid aad ula jaan qaadi kara xml ee mashruuca tilmaanta
Indhaha Linux dijo
baass aad u deggan oo leh mashaariic waaweyn laguma kalsoonaan karo, kuguma talinayo inay timo u la'dahay bun si ay u noqoto nooc ugu yaraan tartan ugu jira MS PROJECT
laakiin uma imaanayso rakibisteeda ama iskuxirkiisa in la sameeyo, uma arko adeegsi badan oo loogu celcelinayo kuwa kale
La heli karo Slax 7 "Green Horn"